Mogadishu Journal » 2018 » December » 4
Mjournal :-Agaasimaha idaacada Hiddo Ismaaciil Sheekh Khaliifa kanamid ah weriyaasha caanka ah ee sida weyn looga yaqaan magaalada Muqdisho ayaa ku dhaawacmay waxyaalaha qarxa oo loogu xirey gaarigiisa. Weriyaha ayaa la sheegay inuu aad u dhiig baxay uuna dhaawaca ka soo gaaray...
Mjournal :-Abaanduulaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Odawaa Yuusuf Raage ayaa gaaray magaalada Magaalada Buulo-Burde ee Gobolka Hiiraan. fdiga Abaandulaha ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay ku sugnaayeen magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka...
Mjournal :-Cadaadis kaga yimid beesha caalamka ayaa qasabtay in Madaxweynaha Maamulka Somaliand Muuse Biixi uu bedelo mowqifkiisii ahaa inuu hakad geliyo wadahadaladii Dowlada Federalka. Sarkaal u hadlay maamulka Somaliland ayaa sheegay in wafdi ka socda midowga Yurub ay kulamo...
Mjournal :-Ciidanka Booliska ayaa howlgallo ka wadda Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed. Howlgallada ayaa ka socda Xaafadda Wadajir oo ka mid ah Xaafaddaha Magaalada Baydhabo, waxaana ciidanka ay baarayaan Guryaha ku yaalla si loo xaqiijiyo...
Mjournal :-Wadahadal saacaddihii lasoo dhaafay u socday Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Madaxda ugu sareysa dalka sidda Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa la isku mari waayay. Waxyaabaha Wadahaddalada looga hadlaayay waxaa ka mid...
Khilaafka Madaxda Puntland oo soo shaac baxay
Mjournal :-Khilaaf xooggan ayaa soo gala dhexgalay Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland xilli maalmihii lasoo dhaafay labada dhinac ay sameeyeen tilaabooyin iska soo horjeedda. Khilaafka ayaa soo bilowday sanad ka hor, laakiin waxaa arintaasi ku jiray...